About Us - Jinbiao Fanorenana Fitaovana Co., Ltd.
Fampiasana sakana amin'ny tabataba
Hebei JINBIAO CONSTRUCTION FITAOVANA TECH Corp., LTD.
Ny tena tanjona dia ny hanome ny mpanjifa maneran-tany miaraka amin'ny kalitao tsara, mifaninana vidiny, afa-po sy ny lahateny asa tsara. Customer fahafaham-po no tena tanjona. Izahay miarahaba anareo tonga soa hamangy ny showroom sy ny birao. Manantena izahay mba hanorina fifandraisana raharaham-barotra miaraka aminao.
Hebei Jinbiao Construction Fitaovana dia naorina tamin'ny 1986 manokana ao ny famokarana fitaovana fanorenana. Mitana ny orinasa mihoatra ny 800,000m2 faritra, miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 400, 40 manam-pahaizana manokana, voasoratra anarana renivohitry ny 60.4 tapitrisa RMB, nahatratra 500 tapitrisa yuan ny liquidity.In Shijiazhuang, 26 Desambra 2014, ny orinasa dia voasoratra ao amin'ny tahiry fifanakalozana, lasa ny orinasa eto an-toerana voalohany voatanisa ao amin'ny faritra, ny vokatra dia voasoratra ara-panjakana ihany koa ny fitsipika volamena harato, tabataba sakana sy ny aluminium formwork marika. Teo am-piandohan'ireo 90 taona, nandalo Jinbiao ISO9001- 2000 toetra taratasy fanamarinana anisan'izany ny "AAA kilasy kalitaon'ny fanamarinana", "faritanin'i Hebei miavaka orinasa", "itokisana orinasa", "azo antoka famokarana" sy ny taratasy fanamarinana hafa voninahitra.
Hebei Jinbiao Construction Fitaovana Tech Corp., Ltd. dia tafiditra ao amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana ny tariby harato fencings, fefy tariby sy mifandray vokatra monina any Anping, ny malaza harato Wire Tany Shina.
Product Quality: ny vokatra izay no lasa ISO9001 taratasy fanamarinana ny rafitra fitantanana tsara, tamin'ny taona vokatra taratasy fanamarinana, ary nanorina fiaraha-miasa maharitra amin'ny Acoustic Institutions any Azia Atsimo Atsinanana. Ankoatra JINBIAO mametraka ny toetra manokana maso ekipa mba hahazoana antoka fa ny entana rehetra dia mahay tsara.
Ny fahafaha-mamokatra: JINBIAO Company manana 3 famokarana zavamaniry anisan'izany Wire harato Fefy, Sound sakana sy Aluminum Formwork. Daily famokarana fahaiza-dia afaka tonga 18km fefy, sakana misy kilema 5000 m2, ary 8000 pcs H lahatsoratra vy. Aluminium Formwork natao sy vokatra ho an'ny mihoatra ny 10 milentika trano isam-bolana.
Jinbiao dia fitaovana mihoatra ny 80 karazana kilasy voalohany famokarana maso sy ny R & D fitaovana hamokarana-joro lahatsoratra tariby harato fefy, welded tariby harato horonan-taratasy, rojo rohy fefy, akoho tariby harato, ondry / omby / saha fefy, fefy tariby sy ny tabataba sakana ho an'ny maneran-tany mpanjifa.
Manana fitsipika famokarana sy ny fanaraha-maso ny kalitao tanteraka mba hahazoana antoka rafitra avo lenta vokatra hihaona ny mpanjifa 'ilaina.
Ny orinasa dia nahazo laza tsara ao Shina ary fanondranana entana ny firenena maro sy ny faritra.
Fa ny fencing zavatra ilaina, dia mifandraisa aminay izao!
Ny tanjona manaraka dia ny mihoatra ny zavatra andrasana avy amin'ny mpanjifa rehetra amin'ny alalan'ny fanomezana miavaka mpanjifa, manovaova bebe kokoa ary zava-dehibe. Rehetra izao amin'ny rehetra, tsy misy ny mpanjifa tsy misy; tsy sambatra sy afa-po tanteraka mpanjifa, tsy isika. Isika mitady ny ambongadiny, Drop sambo. Mba andefaso olona izahay raha mahaliana ny vokatra. Manantena ny hanao raharaham-barotra aminareo rehetra. Kalitao avo sy ny fifadian-kanina sambo!
Nanomboka ny fananganana, mitandrina amin'ny fanatsarana ny vokatra sy ny mpanjifa. Isika dia afaka manome anao ny maro be volo vokatra avo lenta amin'ny fifaninanana vidiny. Koa dia afaka mamokatra volo samihafa entana araka ny santionany. Tsy misisika amin'ny avo kalitao sy ny vidiny mirary. Raha tsy izany, dia manome OEM tsara indrindra fanompoana. Amim-pitiavana isika handray OEM didy sy ny mpanjifa manerana izao tontolo izao mba hiara-miasa amintsika noho ny fiaraha-mientana ifampizarana fampandrosoana amin'ny ho avy.
Amin'izao fotoana izao ny varotra tambajotra mitombo mandrakariva, fanatsarana ny kalitao fanompoana hitsena ny fangatahan'ny mpanjifa. Raha toa ianao ka liana amin'ny vokatra rehetra, dia mifandraisa antsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy miandry fatratra mamorona fifandraisana mahomby raharaham-barotra miaraka aminao ao amin'ny hoavy tsy ho ela.
Isika hanatitra ny lehibe isan-karazany ny vokatra any an-tsaha ity. Ankoatra izany, namboarina baiko ihany koa ny misy. Inona no bebe kokoa ianao, dia hahazo ny tolotra tsara. Amin'ny teny iray, ny fahafaham-po azo antoka. Tongasoa eto amin'ny hitsidika ny orinasa! Raha mila fanazavana fanampiny, azafady tonga ny website.If fanontaniana intsony, Aza misalasala mifandray aminay.
Vita tanteraka — Rongwu High-spe ...
Ny efitrano fampirantiana vaovao
Vokatra alimina an'ny Jinbiao